မကြာခင် ထွက်ရှိမယ့် Nokia ရဲ့ Product အသစ်က ဘာဖြစ်မလဲ? – MyTech Myanmar
မကြာခင် ထွက်ရှိမယ့် Nokia ရဲ့ Product အသစ်က ဘာဖြစ်မလဲ?
Nokia ဟာ လာမယ့် မေလ ၂၉ ရက် အင်္ဂါနေ့ မှာ သူ့ရဲ့ Product အသစ်ကို Launch လုပ်မယ့် Event အကြောင်း ကြေညာထားပါတယ်။ ဒီ Event မှာ ဘာကို Launch လုပ်မယ်လို့ မကြေညာသေးပဲ #chargedup ဆိုပြီးသာ Social Media တွေမှာ တွေ့ရပါတယ်။
ဒီ Charged up Product ဟာ Nokia ရဲ့ ဖုန်းအသစ်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ရှိပြီးသား ဖုန်းတွေကို မရသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ရမယ့် ကြေညာချက် မျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တချို့တွေ ကတော့ Nokia9ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေ ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Nokia 8 Sirocco က ထွက်တာ သိပ်မကြာသေးတော့ Nokia9လို High – end ဖုန်းတစ်လုံးကို Launch လုပ်မယ်ဆိုရင် အနည်းငယ် စောနေပါသေးတယ်။ တချို့တွေ ကတော့ Nokia ရဲ့ Budget Devices တွေကို Update တချို့လုပ်ပြီး ချပြလာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။
Nokia ကတော့ ဖုန်းလောကကို အာရုံစိုက်လာအောင် ဖန်တီးလိုက်ပြန်ပါပြီ။ ဘာတွေ လုပ်ပြဦးမလဲ ဆိုတာတော့ သေချာ ခန့်မှန်းလို့ မရသေးပါဘူး။ ပရိတ်သတ်ကြီးရော Nokia ရဲ့ Charged Up Product က ဘာဖြစ်မယ်လို့ ထင်ကြလဲ။ လာမယ့် ၂၉ ရက်နေ့ကျမှ အတူတူရင်ခုန်ကြတာပေါ့။
MyTech Myanmar2018-05-27T21:13:27+06:30May 27th, 2018|Mobile Phones|